Dirrooleen kan fayyadan daataa warra galmeetti jijjiiraman kan akka lakkoofsa guyyaa har'a or dimshaasha fuula galmee tokko kessatti argamuu.
Galmee irrati akaakuuwwan dirree gara caalaa, dirreewwan kuusdeetaa dabalatee, gatiiwwan jijjiiramaa kuusin agarsiisamu.
Dirree yammu cuqaastu, akaakuuwwan dirree kan kannan gadi gocha kana hojjoomuu:
Akeektuu hantuutee gara wabii siiqsi.
Qabeentoota diree gulaaluf qaqaa banu
Galmee irratti dirreewwan mara haaromsuf, F9 dhibii, ykn Gulaali - Mara Fili filitti, kana booda F9 dhibii.
Dirree wara kuusa deetaa irra saagamani haaromsuf, dirree filitti, kana booda F9 dhibi.
Fayyadamaa Deetaa Dirreewwan ykn Haaloota irra Gaafata
Dirreewwan Naqaa Ida'uu
Dirree Guyyaa Jijjiiramaa ykn Dhaabbataa Saaguu
Lakkoofsa Fuulaaf Barruu Otoola
Title is: Waa'ee Dirroolee